I-Semalt Expert: Indlela yokukhipha iDarodar kwi-Google Analytics
I-Google Analytics ibika inani elikhulu lewebhusayithi ukuba lingabonakali kwaye lithembeke. Omnye wabo nguDarodar.com; Imibiko yakutshanje ibonisa ukuba ayizange ithumele iindwendwe zangempela kwiiwebhusayithi zazo zabaxhasi. Kuthetha ukuba inkqubo yophando ngegama elingundoqo ayinanto yokwenza ngokuqinisekileyo njengoko i-robot ebalwa ngamanani akho ngokuchanekileyo.
Ukuba uhlolisisa izicwangciso ze-Google Analytics kuyo yonke indawo yokuhanjiswa, uya kugcina ukuba ukuhanjiswa kweDarodar.com kukho ukulimaza ingxelo yakho kunye ne-Analytics. Kuzo zonke iingxelo, iDarodar ibonisa isivakalisi esitsha esivela kwi-IP entsha, kunye nezinga lokuxhamla likhulu leepesenti, eliyona nkxalabo enkulu kwi-webmasters. Uza kuphinda uqaphele ukuba i-Google ibhalisile iDarodar kunye nazo zonke iinkonzo ezinxulumene nayo. Ngoko, isiphelo iinkonzo ezinjengalezi akumele zisetyenziswe ngexesha lokusebenzisa iwebhusayithi yakho.
uMax Bell, umphathi we-Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, utsho ukuba inyaniso ukuba iDarodar ithumela abathengi bayo kuphela ngeendwendwe ezimbalwa ngenyanga, kwaye zonke zihanjisiwe..Uninzi lweendwendwe luyinyumba; Nangona kunjalo, unako ukubala inani elipheleleyo leembono egameni lakho kwaye akufanele kuxhomekeke kwiingxelo zikaDarodar. Kwakhona kubalulekile ukuba ungathembeli ekutyeleleni kwabo njengoko bonke bengewona. Ukuba uye wasebenzisa iinkonzo zokubloga ezinokubanjelwa njengeBlogger kunye neWindowsPress, ngoko kulula ukuba uvimbele iDarodar. Kule nto, kufuneka umise iseva yakho ekufumaneni i-traffic kunye nayo nakwezinye iiwebhusayithi ezifanayo.
Ukususa iDarodar kwakungeke kube lula
Kuyinyaniso ukuba ukususa iDarodar akulula. Uya kufuneka unakekele izinto ezininzi. Isinyathelo sokuqala kukungena kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye ukhangele icandelo lolawulo kwicala eliphezulu lasekunene. Isinyathelo esilandelayo kukudala izihlungi okanye zifumane izihlungi ezisele zikhona kwicala lasekunene. Ukuba awuzange udale izihlungi, kufuneka ubenze kwaye ufumane ukufikelela ngokupheleleyo kwicandelo lolawulo. Isinyathelo sesithathu kukucofa ukhetho olutsha lwefayile kwaye uzivumele udale izihlungi zesiko kwiData ye-Google Analytics. Ekuqaleni, konke oku kuya kuthatha ixesha elide, kodwa xa uzinzile uze udale inani lokuhlunga, kuya kuba lula ukuba ufumane uhambo oluthile kwiwebhusayithi yakho. Ungalungisa nayiphi na intsimi ngokusekelwe kwinto oyenzile. Injongo kuphela ukukhubaza iDarodar kunye neembono zayo ezinokuthi zingenwe kwicandelo leprojekthi yokucoca. Apha uya kufuneka uyivimbele kwaye uklikha kwi-option yokugcina ukugcina zonke izicwangciso zigcinwa. Iifayile zakho ziza kuthatha ixesha lokuba ziphile. Akufanele ulibale ukuba zonke ezi nyathelo zibalulekile. Ukuba ufumene i-fake traffic kwaye wayengazi nto malunga namanani akho, kufuneka uvalise idilesi yakho ye-IP xa udale ezinye izihlungi. Konke oku kuya kuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ithatha ukutyelela okwenene kunye nokwenene kubantu xa bebancinci kumanani. Ukuze uhlaziywe kwakhona, kufuneka uqhubeke uhlola i-website yethu kwaye ufunde amanqaku ethu atshanje Source .